China pp isina mhango pepa, pp chemarata chemuti Mugadziri uye mutengesi | Sihai
Pp hollow sheet (Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) irimwe rakabuditswa mapatya madziro mhango jira rinoumbwa nemadziro maviri akati sandara akabatanidzwa nembabvu dzakatwasuka. P hollow pepa rinozivawo sey chemaraki sheet, pp chemarata bhodhi, pp hollow board, pp corflute sheet, pp nyere bhodhi, pp correx sheet uye pp coroplast sheet.
pp chemarata sheet inogona kushandiswa mune ese maindasitiri, ekurongedza, ekudhinda, kushambadzira, kuvaka uye nevamwe. Iyo pp chemarata pepa dhizaini mapatya-madziro, inorega iyo pp chemarata bhodhi yakawanda anti-kugogodza uye chengetedza zvigadzirwa mushe pakurongedza nekutakura.
Pp hollow sheet (Polypropylene Hollow Corrugated Plastic Sheet) irimwe rakabuditswa mapatya madziro mhango jira rinoumbwa nemadziro maviri akati sandara akabatanidzwa nembabvu dzakatwasuka. P hollow pepa rinozivawo sey chemaraki sheet, pp chemarata bhodhi, pp hollow board, pp corflute sheet, pp nyere bhodhi, pp correx sheet uye pp coroplast sheet. p hollow sheet rinonyanya kugadzirwa kubva kune yakanyanya kukonzeresa co-polymer polypropylene (PP), iyo inogona kudzokororazve, inotakurika, yakasimba uye inogona kushandiswazve nezvimwe. , kushambadzira, kuvaka, kurima, indasitiri uye Mishonga nezvimwe.
Tinogona kugadzirwa kuita hukobvu kubva pa2mm -12mm, kazhinji, iyo 2-5mm gobvu inoshandiswa zvakanyanya kuputira zvigadzirwa, uye 4-6mm gobvu inoshandiswa kushambadzira, sekureva kwakasiyana kushanda, iyo GSM inogona kugadzirwa yakagadzirwa, iyo yakakwira GSM bhodhi rakasimba. Pp isina mhango jira chinhu chitsva chinogona kushandiswa mune ese maindasitiri, chinhu chinoshanduka chinogadziriswa chinogona kugadzirwa nechero chimiro, chero saizi. Iyo p isina mhango jira zvinoenderana nekushandisa kwakasiyana, inogona kuitwa murazvo unodzora pp bhodhi, ESD pp chemarata, uye UV inodzivirira pp isina mhango, inogona zvakare kuita corona kurapwa kwekudhinda uchishandisa.
2-12mm pp mhango jira, pp chemarata mapepa tsanangudzo
Ukobvu 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9-10mm 11mm 12mm
GSM (g / m)2) 350 ± 30 500 ± 30 700 ± 30 800 ± 30 1000 ± 30 1450 ± 30 1650 ± 30 1800 ± 30 2000 ± 30 2200 ± 30
Ruvara uye saizi Yakasarudzika ruvara, saizi yakagadziriswa (max upamhi 2300mm, kureba chero saizi)
Sarudzo 1.Moto Unodzora
PP mhango jira zvazvakanakira.
1) Chiedza Kurema, yakasimba
2) Innocuous, isiri-kuravira, Kusvibisa-isina
3) Isina mvura, isina mwando
4) Shock nemishonga, Kuchembera nemishonga, ngura nemishonga, Heat kuputira
5) Kudzokorora \_ nharaunda-inoshamwaridzika
6) Ruvara rwakawanda, saizi yakagadziriswa, inoshanduka kushandisa
PP mhango jira rine huremu hwakareruka, hwakasimba, yunifomu ukobvu, yakatsetseka pamusoro, yakanaka kupisa kupisa, yakakwira michini simba, yakanakisa makemikari kugadzikana uye magetsi kuputira, isina-chepfu hunhu. Inogona kuve maererano neshandiso dzakasiyana wedzera ESD zvinhu zvakagadzirwa ESD pp isina mhango, wedzera UV zvinhu zvakagadzira UV kudzivirira pp chemarata pepa zvichingodaro. Saka chinhu chinoshanduka chinogona kushandiswa mune ese maindasitiri.
PP chemarata chemapepa ekushandisa:
1. maindasitiri chigadzirwa kurongedza turnover: kuputira turnover bhokisi, storages bhokisi, imba yekuchengetera, imba yekuchengetera, bhokisi rekutakura, kurongedza bhokisi, ESD bhokisi, ESD kurongedza bhokisi, zvemagetsi zvigadzirwa kurongedza turnover bhokisi, epurasitiki zvikamu bhokisi rekudzoka, bhokisi kugovera, ESD mhango bhodhi turnover bhokisi, conductive mhango bhodhi turnover bhokisi.
2. Nyaya uye bhegi rinotsigira bhodhi: kesi uye bhegi lining bhodhi, kesi uye bhegi inotsigira bhodhi, partition board.
3. Bhodhoro, silika inoyerera indasitiri: girazi bhodhoro redhiyo padhi, doro bhodhoro rukoko padhi, magaba zvigadzirwa dura padhi, silika inodzika paduru padhi, mabhodhoro kupatsanura, pallet dura pad, pallets kurongedza pad
4. Machina indasitiri: Mashini cushion dura pad, muchina epurasitiki zvikamu, muchina zvikamu muparadzi.
5.Kushambadzira indasitiri: PP mhango bhodhi kuratidza bhokisi, kuratidza rack, kushambadzira bhodhi, corona bhodhi, coroplast chikwangwani, chiratidzo bhodhi, kuratidza bhokisi, pp chemarata zviratidzo, pp mhango jira kushambadzira bhodhi
6. Kushongedza imba: siringi bhodhi, grille jira, kugovera chimbuzi, storages bhokisi, storages mudziyo
7. fekitori indasitiri: tii tafura bonde bhodhi, fanicha yekushongedza bhodhi.
8. Zvekurima: mhando dzese dzemabhokisi emichero, mabhokisi emiriwo, mabhokisi ezvipembenene, mabhokisi ezvekudya, mabhokisi ezvinwiwa.
9. Stationery nemitambo zvigadzirwa: smart bhodhi, faira bhegi, mafaera bhokisi.
10.Motokari indasitiri: mudhiraivho pad, mota muswe ndiro, dura pad, auto zvikamu divider, auto turnover bhokisi, auto zvikamu chengetedzo bhokisi
11. indasitiri yemagetsi: firiji backboard, muchina wekuwachisa kumashure, firiji kukamura.
12. Zvigadzirwa zvevacheche: nguruve zvikamu, ngoro backboard, ngoro cushion, chipenga chevana chakangwara.
PP mhango jira zvinoshandiswa zvakanyanya, iyo yekushandisa munda mune inogara ichipinda, inongogadziridzwa chikamu chayo, kune nzvimbo zhinji dzinofanirwa kuvandudzwa.
Pashure: pp chemarata chikamu
Zvadaro: mapeji erudzi rwekutora bhokisi
Yakanakisa Mutengo P Corrugated Plastiki Sheet
Coroplast Plastiki Sheet
Coroplast Pp Mahwendefa
Coroplast Dhinda Correx Bhodhi
Plastiki Pp Corrugated Sheet
Polypropylene Corrugated nyere Bhodhi
P Corflute Corrugated Sheet
Pp Coroplast Bhodhi
Pp Coroplast Correx Bhodhi
pp coroplast kurongedza pepa
pp corrugated correx jira
mapeji erudzi rwekutakura pepa
Mapeji Corrugated Plastic Corflute Sheet
P Corrugated Plastiki Coroplasts Sheet
Mapeji Corrugated Plastiki Sheet